Nepal Dayari | टिपरले दुई विद्यार्थीको ज्यान लिएपछि शिक्षक भ”क्कानिए ! बाँचेकी नानीलाई ब्याक गरेर मा”रियो……
टिपरले दुई विद्यार्थीको ज्यान लिएपछि शिक्षक भ”क्कानिए ! बाँचेकी नानीलाई ब्याक गरेर मा”रियो……
चैत्र १९, २०७८ शनिबार २४३ पटक हेरिएको
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं १ सुन्दरीजल नजिकैको मेलम्ची चोकमा निकै दुख लाग्दो घ’टना घ’टेको छ ।मेलम्ची चोकबाट करिब ५०० मिटर भित्र टिपरको ठ”क्करबाट स्कुल जाँदै गरेका दुई बालिकाको मृ”त्यु भएको छ । स्थानीय रोहन घिसिङको छोरी श्रीष्टी घिसिङ र श्रेया घिसिङको घ”टनास्थलमै मृ”त्यु भएको छ ।बुबासँग मोटरसाइकलमा स्कुल जाँदै गर्दा टिपरले ठ”क्कर दिएको थियो ।बुबा रोहनको पनि अवस्था निकै ग”म्भीर छ र उनी हस्पिटलमा आई सि यु मा उपचाररत छन् ।
सहमतिपछि दुवै बालिका दिदीबहिनीको श’व आफन्तले बुझेर लगेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष राम मानन्धरले जानकारी दिए । ठ’क्कर दिने टिपर कम्पनी सुन्दरी माई वासिङले ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र घा’इते रोहन तामाङको उपचार गर्ने सहमति गरेका हुन् । घ”टनापछि आ’क्रोशित स्थानीय र आफन्तले टिपरमा आ’गजनी गरेका थिए । मेलम्ची चोकको स्थानीयले प्रदर्शन समेत गरेका थिए । स्थिति नियन्त्रणमा लिन बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।
मेलम्ची चोक नजिकै ब्याक गर्दै गरेको बा४ख ६९६५ नम्बरको टिपरले उनीहरूलाई कि’चेको थियो। स्थानीय वर्ल्ड यूथ इन्टरनेसनल स्कुलमा सृष्टि २ मा र श्रेया नर्सरीमा पढ्ने दुवै जनाको घ’टनास्थलमै ज्यान गएको थियो । बिहान ८ बजेतिर बुबा रोहन तामाङसँग मोटरसाइकलमा जाँदै गरेका ८ वर्षीया सृष्टि र ४ वर्षीया श्रेयाको टिपरको ठ’क्करबाट ज्यान गएको थियो ।
टिपरको ठ’क्करबाट ज्यान गु”माएका दुई बालिकाको श’व १० घण्टापछि उठाइएको छ ।
दिउँसो स्थानीय प्रशासनको रोहवरमा आफन्त र टिपर कम्पनीसँगको छलफलपछि श’व उठाइएको हो । टिपर कम्पनीले मृ’तकका परिवारलाई ४५ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको छ । त्यस्तै घा’इतेको उपचार पनि टिपर कम्पनीले नै गर्ने सहमति भएको हो । त्यस्तै, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पी”डित परिवारका एक जनालाई नगरपालिकामा रोजगारी दिने र नगरपालिकाबाट समेत केही रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।
सहमतिपछि पी’डित परिवारले दुवै जनाको श’व बुझेर लगेका हुन् । ग’म्भीर घा’इते रोहनको नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेलमा उपचार भइरहेको छ। पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।